ONN: Waxabajji 5, 2018 – Oromiyaa irraa; – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooONN: Waxabajji 5, 2018 – Oromiyaa irraa;
ONN: Waxabajji 5,2018-Oromiyaa irraa
Lolli Uummata Oromootti Labsamee Jira.
Gabaasaaleen keenya bakkoota hedduurraa akka nuuf gabaasaa jiranitti, ilmaan Oromoo irratti lolli labsamee waraana keessa jiraachuu nuun gahaa jiru.
Adeemsa dhoksaan Oromoo irratti lolli baname kanaan, ollaa Oromoof Oromiyaa akkasuma maqaa waraana Liyyuu Ayilii Wayyaaneen Leenjiseen bobbaa mootummaan taasiseen Oromoo lafa isaa irratti lolli banamuun balaa hedduuf saaxilaa jira.
Balaawwan kunneen itti yaadamuun ji’a Soomaa keessatti ilmaan Oromoo Musiliima soomarra jiran irratti xiyyeefatuun kan bobba’e cinatti daangaa Oromiyaa irraan dhukaasaaleen jabaan banamuu nuu gabaasaa jiru.
Haaluma kanaan Oromoo Wallloo, Gujii (Gujiif Geedoo) gidduutti, Baha Oromiyaa Liyyuu Poolosii, Lixa Oromiyaa Benishaangul Gumuziif Oromoo gidduutti torbanoota kana lolli adeemaa jira.
Haala hammaataan kanaan badiiwwan gahaa jiraniin, lubbuun namaa akka malee darbaa jira. Manneen uummataa 50 ol gubatees jiraatuu (Begiitti), uummanni lakkoofsaan hedduun wareegamuu (Walloof, Gujii, Baha Oromiyaatti) nuu gabaasu.
Waraanni ta’e jedhamee Oromoo dadhabsiisuuf banamee jiru kun mootummaan itti yaadee kan raawwataa jiru, sirni Abiyyi Ahemadiin durfamu xiyyeeffannoon Oromoo ajjeesuu itti fufuu isaa kan raagessudha.
Gartuun Abiyyi Ahemadiin durfaman aangoo siyyaasaaf hunda of harka galfatanii utuu jiraniin waraana isaanii uummatatti lakkisuun shiftummaa isaanii mirkaneessaa jiru.
Gocha Oromoof Oromiyaa irratti raawwataa jiru Qeerroo Bilisummaa Oromoo gadjabeessee balaaleffata. Qabsoo roga maraan finiinsuun dura dhaabbannoof qolannaa uummatasaaf akka ta’us cimsee hubachiisa.
Godina wallaggaa lixaa aanaa najjoo
Guyyaa har’a jechuun 05/06/2018 aanaa Naajjootti barattootni qormaata sa’aatii booda erga fudhaatani rawwatani boda naannoo sa’aati 11:30 irraattii ibsan sababa maaliif nurraa citee jira jechuun walitti qabamani naannoo wajjira ibsaa mana Dula kajela dhaqun gaaffii yeroo gaafachuuf jedhan itti gaafatamtun wajjiricha Ayyantuu kan jedhamtu itti ba’u diddee dhokattee karaa biraa galtee jennan warrii kanis nasuudhaan dhokatani lubbun banaan ijoolleen aruudhaan mastawiti manichaa caccabsani deeman
Waxabajjii 5, 2018
Baadimmee: Kana booda lafti hanga taakkuu tokkoo sun kan namni kuma 700 ol irratti dhume, waggaa 20f biyyoota lamaan gidduutti nageenya dhabsiiste, ummata obbolaa lamaan addaan fageessite, olaantummaa namoota lamaa mirkaneessuu qofaaf nageenya naannoo booressite, kan yookaan albuudni ishee hin abdatamne yookaan ammoo oyiruun ishee midhaan hin biqichine nagaan Ertiraaf kennamte. Sirni wayyaanee waggaa 20f waliigaltee UN dhiitee humnaan dhuunfatee ture har’a dabarsee kennuuf dirqame. Dogoggora fokkisaan akkasii akka irra hin deebi’amneef wabiin amansiisaan jiraachuu baatus, abbaa haqaa haqa argachuun ummata Ertiraa fi mootummaa Ertiraa cichoominaan mirga isaaf dhaabbateef kabaja guddaadha.
ONN: Adooleessa 20, 2018 - Oromiyaa Keessatti
SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Waxabajji 1, 2018 SBO: Waxabajjii 01 bara 2018. Oduu, Ijoo Dubbii…
Oromiyaa irraa: Oduu gara garaa, Waxabajjii 30, 2018 ONN: Waxabajji 30,2018-Harar =========================== Hiriira deggarsaa jechuun…